योहो संवाददाता १५२ दिन अघि
योहो संवाददाता ५९५ दिन अघि
कहिलेसम्म निर्मलाको नियति भोग्नुपर्ने चेलीले ?
योहो संवाददाता ८२८ दिन अघि
बलात्कार अनि हत्या ! सम्भवत् योभन्दा ठूलो पाप संसारमा अर्को हुन सक्दैन । यस्तो जघन्य र कुरूप अपराधका दोषी पत्ता लगाउन माग गर्ने जनतालाई गोली दाग्ने राज्य झन् कति दरिद्र मानसिकताको होला ? कल्पनाले आङ्ग उचाल्छ ।
कहालीलाग्दो हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्र
योहो संवाददाता ८३८ दिन अघि
र्तमान युगमा पनि एक चक्की औषधी खान नपाएर वा अस्पतालको मुखै नदेखेर मर्ने नागरिक भएका केही मुलुकमा नेपाल पनि पर्छ । झाडापखाला हाम्रो देशमा महामरी बन्छ । सामान्य ज्वरोको उपचार अभावमा मर्नेको संख्या कम छैन ।
कहिलेसम्म हुने न्यायमा राजनीति हाबी ?
योहो संवाददाता ८४४ दिन अघि
न्यायालयमा जबसम्म राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा न्यायाधीश मनोनीत हुन्छन्, तबसम्म यस्ता विवादहरू बाहिर आई नै रहन्छन् । मुलुकको न्यायप्रणाली नैतिकवान् बनाइराख्ने हो भने सबैभन्दा पहिले राजनीतिक नेतृत्व नै यस विषयमा गम्भीर बन्नैपर्छ । अदालतमा राजनीतिक आस्थाका आधारमा गरिने मनोनयनलाई रोक्नैपर्छ । अहिले सर्वोच्चमा देखिएको विवादको चुरो नै राजनीतिक मनोनय हो भन्ने सबैले बुझेकै छन् । मुलुकका हरेक अंगलाई बलियो बनाउने हो भने राजनीतिको प्रभाव सत्ता संचालनभन्दा बाहिर जानु हुँदैन । राजनीतिक दलहरूसमेत आपूmले गर्न हुने र नहुने विषयमा हद तोक्ने हो भने भविष्यमा यस्ता विवाद सामान्यीकरण हुँदै जानेछन् । अन्यथा कुनै दिन यस्तो पनि आउन सक्छ, जहाँ यस्ता समस्या निराकरणको उपाय हामी कसैसँग हुनेछैन ।